Ịchọ mma nke ụlọ gị - Concept-Usine ihe niile maka ime na mputa | Icho mma
Echiche-Usine: Ihe niile maka ime na mputa na ihe ndozi nke ụlọ gị
Susana godoy | | .Chọ Mma
Ime ụlọ dị iche iche na-abanye n'ime ihe ịchọ mma nke ụlọ gị nke ị ga-enye aka ahụ nke ịhụnanya, àgwà na ezigbo ụtọ. Maka nke a, ọ dịghị ihe dị ka ịhọrọ ngwá ụlọ dị mma nke na-anọchite anya ihe a niile. Yabụ ọ bụrụ na ị nọ na usoro ahụ mana enweghị echiche maka otu ị ga - esi chọọ ụlọ ọ bụla mma, ị nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Ebe ọ bụ anyị ga-aga ije site n'ime ime nakwa n'èzí na mma nke ụlọ gị. Iji nwee ike inye ya ntụgharị ahụ ị chọrọ, na ngwá ụlọ na ụda nke ị na-arọ nrọ mgbe nile. Ọ bụ oge iji nweta ya nke ọma na oge mbụ yana ndụmọdụ anyị taa, ihe niile ga-adị mfe karị. Ị dịla njikere ma ọ bụ dị njikere ịchọpụta?
1 Ime ụlọ: Otu n'ime ọnụ ụlọ kachasị mkpa na ihe ịchọ mma nke ụlọ gị
2 Echiche ndị bụ isi ịhọrọ ụlọ iri nri nke nrọ gị
3 Mfe n'ime ihe ndozi ime ụlọ
4 Ezigbo ihe ndabere dị na ụlọ gị na n'èzí ịchọ mma
Ime ụlọ: Otu n'ime ọnụ ụlọ kachasị mkpa na ihe ịchọ mma nke ụlọ gị
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na a na-ewere ụlọ nzukọ ahụ mgbe nile ka otu n'ime ebe ofufe. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ụzọ doro anya, ebe ọ bụ na anyị na-etinye oge ka ukwuu n'ebe ahụ, ma naanị anyị ma n'ime ezinụlọ anyị. Ya mere, nkọwa ọ bụla ga-abụ nke ziri ezi nke na-akpọ nkasi obi kamakwa ụtọ dị mma. Na mbụ, Ị ga-ahọrọ sofa ka otu n'ime echiche ndị bụ isi ga-abụ ịkụ nzọ na oche abụọ maka obere ọnụ ụlọ. ma ọ bụ ndị oche atọ maka ndị kasị ukwuu. Na njedebe dị mfe na nke ị nwekwara ike ịhọrọ ihe ndị a ga-eme. Iji nye gị echiche, n'ime Echiche-U Ị ga-enwe ha niile na otu ị masịrị ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ohere kachasị na ihe ịchọ mma ụlọ gị, ọ dịghị ihe dị ka ịhọrọ ihe a na-akpọ akuku ma ọ bụ 'chaise longue'. Bara uru ma dị mma ebe ọ bụ na anyị ga-ahụkwa ha na agba dị iche iche na njedebe. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ohere kachasị mma, mgbe ahụ ndị na-atụgharị n'ime akwa ga-abụ nhọrọ kacha mma. Maka ha niile, ị nwere ike ịnwe tebụl etiti ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ọ ka mma. Ndị na-ebili zuru oke iji nweta nkasi obi na inwe ike ịchekwa ọtụtụ ihe.
Echiche ndị bụ isi ịhọrọ ụlọ iri nri nke nrọ gị
Anyị ga na-edo anya mgbe niile banyere ohere anyị nwere iji tinye ụlọ iri nri n'ụlọ anyị. Ebe ọzọ anyị ga-ekekọrịta oge kacha mma n'ụdị nnọkọ ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi anyị. Ya mere, Nzọ na ụdị dị mfe, ebe a na-emecha osisi dị mkpa na ọcha ga-abụ agba kachasị mma iji jikọta ha.. Tebụl na oche ndị dị ugbu a nwere ọdịdị dị nro nke ga-eme ka ha ghara iburu ohere dị ukwuu, ọbụna na-ahụ anya. Ihe ha ga-ahapụ anyị mgbe niile bụ mmetụta anya nke njupụta, nke bụ ihe anyị chọrọ na ntakịrị ntakịrị. A ụlọ iri ihe ugbu a Ọ na-anabata echiche nke minimalism na ịdị mfe na anyị kwuru nke ukwuu. Ị nwere ike hapụ onwe gị ka ebupụ gị site na ụdị mbụ ebe azụ nke oche nwere ike ịpụta ìhè, ihe na-adịghị mma ma ọ bụ ihe osise dị iche iche.
Mfe n'ime ihe ndozi ime ụlọ
Ime ụlọ bụ ebe anyị kwesịrị ịnọ jụụ ka Morpheus na-abịa kwa abalị iji bata anyị. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị were echiche pụrụ iche buru onwe anyị. Nke mbụ, anyị nwere akwa akwa nke ị nwere ike ịhụ ụdị dị iche iche kpamkpam. Ya bụ ikwu na n'otu aka Ọdịdị osisi dị mfe bụ nhọrọ dị ukwuu inye ohere nye ndị ọzọ na-eru afọ ọdịnihu kacha mma na LED gwụchara, ụdị wavy, wdg. Na-echefughị ​​ndị nwere ndina, nke bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na echiche nchekwa a na-achọsi ike n'oge a. Ozugbo ị doro anya banyere ụdị nhazi nke ihe ndina gị ga-enwe, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ ijikọta ya na tebụl kwekọrọ na ọbụna na uwe ejiji. Ònye na-ahụbeghị nrọ dị ka ndị a na-egosi na fim?
Ezigbo ihe ndabere dị na ụlọ gị na n'èzí ịchọ mma
Mgbe anyị na-ekwu maka ịchọ mma nke ụlọ gị, anyị ga-ekwukwa banyere mpụta ya. N'ihi na ọ bụ ihe ọzọ n'ime ebe anyị ga-ejikwa ohere iji nwee ike zuru ike na oxygenate onwe anyị mgbe ogologo oge anyị rụchara ọrụ. Yabụ, Kedu ihe m chọrọ ka mpaghara a zuo oke? N'otu aka, ị chọrọ ezigbo ọkụ. Ị nwere ike ịhọrọ ịgbakwunye ọtụtụ isi ihe, nke ga-abụ maka ịgbanye ebe ndị ị na-ejikarị eme ihe yana okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ụzọ.
Ma awning na shei dị mkpa otu ahụ. N'ihi na n'ọnọdụ abụọ ahụ, ha ga-echebe anyị pụọ na ihu igwe na-adịghị mma dị ka pergolas ma ọ bụ ogige ubi. Mgbe anyị nwere mkpuchi mkpuchi na ọkụ, anyị ga-enye ohere maka ngwá ụlọ. N'ime ha, ọ dịghị ihe dị ka tebụl dị n'èzí na oche ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ihe dị iche iche dị ka aluminom, resin ma ọ bụ teak osisi, n'etiti ndị ọzọ. Ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ ụbọchị zuru oke ma n'ime ma n'èzí ụlọ gị n'ụdị dị mma, ekele maka ọmarịcha mmasị gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » .Chọ Mma » Echiche-Usine: Ihe niile maka ime na mputa na ihe ndozi nke ụlọ gị
Kedu ka mma nke ụlọ gị si emetụta ezumike gị
Otu esi agba ụlọ obibi nke oge a: họrọ agba nke ọma